Global Voices မြန်မာ » “အမျိုးသမီး တန်းတူ ဝါဒကို ယုံကြသူ” ဆိုတာ ဒီလိုမျိုးဟု အစ္စရေးမှ ပါမောက္ခက ကမ္ဘာကို ပြသ · Global Voices မြန်မာ » Print
ဘာသာ​ပြန်​တင်​ခဲ့​သည့် နေ့စွဲ 20 အောက်တိုဘာ 2015 22:32 GMT 1	 · ရေးသား​သူ Maya Norton ဘာသာ​ပြန်​သူ Josephine Nanmu
အမျိုးအစားများ: အရှေ့​အလယ်​ပိုင်း​နှင့် မြောက်​အာဖရိက, အစ္စရေး, ပညာရေး, ပြည်သူသတင်း, လူငယ်များ, သတင်းကောင်း, အနုပညာနှင့် လူ့ယဉ်ကျေးမှု, အမျိုးသမီး​နှင့် ကျားမကွဲပြားမှု
အထက်ပါဓါတ်ပုံကို Imgur  တွင် လွန်ခဲ့သည့် သုံးရက် (မေ ၁၁, ၂၀၁၅) က တင်ထားခဲ့ချိန်မှစ၍ ထိုဆိုဒ်တစ်ခုတည်းတွင်ပင် အကြိမ်ပေါင်းတစ်သန်းကျော် ထပ်မံ ဝေမျှ ခံထားရပြီး ဖြစ်သည်။ အန်ဂျယ်ဘာ့ဂ်၏ သမီးဖြစ်သူမှ သူမ၏ ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာတွင် ပြန်ကူးယူတင်ထားရာ  Like ပေါင်း ၅၀,၀၀၀ ကျော်ခန့် ရရှိခဲ့သည်။
Imgur တွင် စာဖတ်သူ Cbarbz မှ မှတ်ချက်ပေးထားသည်မှာ ။ ။
EveryonesHiro မှ ထပ်လောင်းပြောကြားထားသည်မှာ ။ ။
လုပ်သက် ၄၅ နှစ်မျှရှိခဲ့ပြီဖြစ်သော လူမှုစိတ်ပညာ ပရော်ဖက်ဆာဖြစ်သူ မြေး ငါးယောက်၏အဖိုး ဒေါက်တာ အန်ဂျယ်ဘာ့ဂ် က ရာဟူး-ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (Yahoo! Parenting) သို့ ပြောကြားသည်မှာ။ ။
အမျိုးသမီး တန်းတူဝါဒီများ လှိုင်းသစ် (New Wave Feminists) ၏ ဖေ့ဘုတ်ခ် စာမျက်နှာပေါ်တွင် အမျိုးသမီးများသည် ကလေးငယ်များကို စာသင်ခန်းထဲသို့ ခေါ်ခွင့်ပြုခြင်းက အမျိးသမီးတွေအတွက် ပို၍ အဆင်ပြေစေသည်လား၊ သို့မဟုတ် စာသင်ခန်းတစ်ခုလုံးအတွက် စိတ်အနှောင့်အယှက် ဖြစ်စရာကောင်းသည်လား ဆိုသည်ကို ဆွေးနွေးနေကြသည်။ ကယ်လီ စမစ် ရေးသားထားသည်မှာ ။ ။
သူမ၏မှတ်ချက်အောက်တွင် ဂျူဒီ ကာလ်ဒါ လင်းဒါမန် ဆိုသူမှ ဆက်လက်ထောက်ခံထားသည်မှာ ။ ။
ဟီဘရူး တက္ကသိုလ်၏ ကလေးငယ်များဆိုင်ရာ ပေါ်လစီများသည်သာ တစ်ခုတည်းသော ချီးကျူးမှတ်သားဖွယ် မဟုတ်ပါ။ ပရော်ဖက်ဆာ ရီ့ဗ်ကာ ကာမီ (M.D) သည် အစ္စရေး တက္ကသိုလ်တစ်ခုကို စတင်ဉီးဆောင်ခဲ့သူ အမျိုးသမီးတစ်ဉီးဖြစ်ပြီး အစ္စရေး တက္ကသိုလ်အကြီးအကဲများ ကော်မတီတွင်လည်း ဥက္ကဌအဖြစ် ပထမဆုံး တာဝန်ယူခဲ့သူ ဖြစ်ပါသည်။ ကော်မတီကို စတင်ပဲ့ကိုင်စဉ်ကတည်းက အကြီးအကဲ ကာမီသည် တက္ကသိုလ်စနစ်တွင် ကျား၊မ တန်းတူညီမျှရေးကို မြှင့်တင်ရန်မှာ သူမ၏ ထိပ်တန်း မျှော်မှန်းချက်များထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်ဟု အောက်ပါအတိုင်း ပြောကြားရင်း  ကြေငြာခဲ့သည်။
နိုင်ငံအနှံ့ရှိ တက္ကသိုလ်များထဲရောက်နေသော ကလေးငယ်များ ဓါတ်ပုံတို့ကို တင်ထားသော  အစ္စရေး ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ဖေ့ဘုတ်ခ်စာမျက်နှာမှ သက်သေထူနေသည်မှာ စာသင်ခန်းအတွင်းရှိ လူအများစုထက် အစ္စရေး ပရော်ဖက်ဆာများသည် ပို၍ ကလေးငယ်များနှင့် ရင်းနှီးသည် ဟူသည့် အချက်ပင်ဖြစ်သည်။
ဟာဒါ့စ် အာရူစီ ရှယ်ထားသော ဤဓါတ်ပုံတွင် သူမ ရှင်းပြထားသည်မှာ ။ ။
URL to article: https://my.globalvoices.org/2015/10/1164
 ရာဟူး-ကလေးပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း (Yahoo! Parenting): https://www.yahoo.com/parenting/simple-photo-sparks-important-parenting-118876378077.html
 ချော့မြူခံနေသော : https://www.facebook.com/israelistudentunion/photos/pcb.810814449007189/810814395673861/?type=1&theater